Taariikhda Qudus: Aqriso Waxyaabo badan oo aadan ka ogeyn Qudus | Xaqiiqonews
Taariikhda Qudus: Aqriso Waxyaabo badan oo aadan ka ogeyn Qudus
Masaajidka Qudus waa mid kamid ah masaajida ugu waa weeyn Caaalamka, waana masaajidka sadaxaad ee ugu muqadiseeysan Islaamka, waa qibladii koowaad ee muslimiinta, waana goobtii laga dheelmiyey nabiga xabiibkeena Muxamed (SCW)Habeenkii Israa’ walmicraaj.
Masaajidkuna wuxuu kuyaalaa xaafada Qadiimiga ah ee magaalada Qudus.
waa masjidkii 2aad ee ladhiso waxaana kahoreeyey oo kaliya masjidka xaramka waxana udhaxaysay muddo afartan sano ah.
Cidii ugu horeeysay ee dagta dhulkan falastiiniyiinta waxay ahaa yeen qoomkii la oranjiray (kancaaniyiinta) oo la sheego inay daganaayeen intii u dhaxaysay sanadihii 3000 ilaaa 1500 kahor dhalshadii Nebi Ciise (Cs).
Qoomkan waxay dhiseen magaladan Qudus oo loo bixiyey (Oorshaliin) oo macnaheedu yahay(Nuur Saliim) magaaladii Nuureysa.
Xiliyadaas kadib waxaa usoo haajiray dhulka falastiin Nebi Ibraahim (cs) isagoo deegaan saday halkaa waxaana uga danbeeyey wiilkiisii Nebi Isxaaq (cs) iyo wiilkii uu a woowaha u ahaa ee Nebi Yacquub (cs).
Intaa kadib waxaa lawareegay gacan kuhaynta magaalad Qudus (Faraaciyiintii) katalinjirtay Dhulka Masar, kadibna waxaa qabsaday (camaaliiqda) dadkii looyaqiinay, ilaa uu kafurtay Nebi Dauud (cs). kadib geeridii Nebi Dauud (cs) waxaa uga danbeeyey wiilkiisii Nebi Suleeymaan (cs) isagoo dib u dhisay masajidkan Qudus.
Wixii xiligaa ka dambeyay Yuhuuddu waxay kusii fidayeen Magaalada ilaa Mareykanku u aqoonsaday Caasimadda Yuhuudda maantadan aaan joogno.
Qudus waa Magaalo Muslimiin, ha yeeshee Diimaha kala duwan waxay uga dhigantahay meel Barakeysan oo mudan in la hanto.
Sooyaalka Taariikhdeduna wuxuu ku tusayaa inay markaste Gacanta ugu jirtay Qolada markaas Gacan-Sareysa.
Shalay Qudus waxay Gacanta Muslimiinta uga baxday xoog iyo Qori-Caaraddii, Maanta isla Dariiqaas ayay kusoo Laaban kartaa.
walaalayaal Taariikhda Qudus laguma koobinkaro qoraal maalin iyo 3 maalin un lasmeeyey…. waana qadiyad muslim ee maahan qadiyad carbeed..
midn ogoow Qudus meesha aytaal Carabaa dhigtay marka, laxwalbaa shilinkeey isdhigdaa lagu qalaa. alle iyo rag un baase umaqan Qudus.
W/Q:Prof: Abdirahmaan Ahmed Alcadaala